Iindaba - Ixabiso leMveliso yeGrass eyenziweyo
1. Iindleko Of Artificial Ingca Product
Izicelo ezahlukeneyo zineemfuno ezahlukeneyo zenkcazo, kwaye iinkcukacha ezahlukeneyo zithetha iindleko ezahlukeneyo. Ukucaciswa okuphambili zizinto zokusebenza, ukuphakama kwemfumba, i-dtex, kunye nokuxinana kobunzima.
Izinto eziphambili eziya kuchaphazela indleko ezingezizo ezokwenziwa kwengca:
Zininzi izinto ezisebenza kunye ukumisela amaxabiso engca eyenziweyo. Izixhobo, ubunzima bomzimba (Ukuchongwa ngobude bePile, iDtex, kunye neStitch Density) kunye nenkxaso zizinto ezintathu eziphambili. Ubungakanani be-odolo buya kuchaphazela iindleko zokuvelisa.
Ngokubanzi, izixhobo zengca yezemidlalo zahlukile kwizinto ezisetyenziselwa ingca yomhlaba.Zenziwe ngezinto eziphambili ngokubaluleka: ingca yezemidlalo ijolise ekusebenzeni kokuhamba, ukukhuselwa komdlali, kunye nokumelana nokunxiba; Ngelixa ingca yokwakheka komhlaba ihlawula ngakumbi inkangeleko (Jonga kakuhle njengengca yokwenyani, okanye nangcono) ukumelana ne-UV, kunye nokhuseleko. Ngaphandle koko,
Ukuphakama kwemfumba, i-Dtex, kunye ne-Stitch Density zisebenza kunye ukumisela ubunzima bobuso. Ubunzima bobuso yinto ebalulekileyo echaphazela ukusebenza kwengca kunye neendleko. Isizathu siyacaca: ubunzima bobunzima obunzima kuthetha izinto ezingaphezulu kunye neziphumo zexabiso eliphezulu.
Owona mqolo uqhelekileyo luxhaswa yi-SBR kunye ne-polyurethane (PU). Ukupakisha kwe-Polyurethane kungcono kodwa ngexabiso eliphezulu kakhulu (malunga ne-USD1.0 ephezulu ngemitha yesikwere). Ukuxhaswa kweLatex kulungile ngokwaneleyo kwiimeko ezininzi. Olunye ulwazi malunga nenkxaso, nceda undwendwele iposti yeNyaniso yeNkxaso yeGrass eyenziweyo.